အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
HomeKnowledgeအသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ရှောင်သင့်တဲ့ အစားအစာ (၇) မျိုး
လူတိုင်းမှာ အစားအသောက်ပုံစံ တစ်မျိုးစီ ရှိကြပါတယ်။ အစားအစာ အများစုကိုတော့ ကလေးဘဝကတည်းက စားခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ အစားအစာတွေကတော့ အသက်ကြီးမှ ပြောင်းလဲစား ဖြစ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့အစားတွေကို ငယ်ရွယ်စဉ်က အမြဲစားခဲ့ပေမယ့် အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ရှောင်ရဖို့ ရှိလာပါတယ်။ အခုဖော်ပြပေးမယ့် အစားအစာ (7) ခုကတော့ သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေတဲ့ အစားအစာတွေကို ဖြစ်ပါတယ်။
ထောပတ် သုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်က စားချင်စရာလေးပါ။ ဒါပေမယ့် ထောပတ် များများစားခြင်းက ဘယ်အသက်အရွယ်နဲ့မဆို မသင့်တော်ပါဘူး။ သင့်နေ့စဉ် စားနေတဲ့ထောပတ်ကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ထောပတ်နဲ့ အဆီများတဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းက ကိုလက်စထရောကို လျော့ကျစေပြီး အသက်ကြီးတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ နှလုံးရောဂါ ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက ထောပတ်အစား သံလွင်ဆီ၊ အခွံမာသီးတွေနဲ့ ထောပတ်သီးစားဖို့ အကြံပေးပါတယ်။
အသက်ကြီးတဲ့သူတွေမှာ ပဲစားခြင်းက အစာချေဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ပဲစားခြင်းက လေတက်တာ၊ လေပွတာ၊ ဝမ်းဖောဝမ်းရောင်ဖြစ်တာ၊ ရင်ပူတာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပဲစားခြင်းကို ရှောင်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ ပဲစေ့လေးကို နည်းနည်းပဲ စားပေးရင် လုံလောက်ပါတယ်။
ထမင်းကလည်း ကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်သင့်တဲ့ အထဲမှာ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထမင်းစားတဲ့အခါ အစာချေဖို့ လွယ်ကူတယ်ဆိုရင်၊ ဝမ်းမချုပ်ဘူးဆိုရင် ထမင်းအနည်းငယ်မျှကို စားနိုင်ပါတယ်။
ကော်ဖီ အများအပြား သောက်ခြင်းက အသားအရေမှာ အရေးအကြောင်းဖြစ်စေဖို့ မြန်ဆန်စေပါတယ်။ ကော်ဖီများများ သောက်တဲ့အခါ စိတ်ဖိစီးစေတဲ့ ဟော်မုန်းထွက်တာ များပါတယ်။ နောက်ပြီး ကော်ဖီက အသားအရေကို မွဲခြောက်စေပြီး အရေတွန့်စေပါတယ်။
5. သကြားဓာတ်များသော အစားအစာများ
အစားအစာတွေ ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် သကြားဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေ မပါအောင် သတိထားပါ။ ဒါ့အပြင် ပေါင်မုန့်၊ နှံစားအပင်နဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာ၊ ယမကာ၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်တွေမှာ သကြားဓာတ်တွေ များပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေက ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုအတွက် ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပြီး ကိုယ်အလေးချိန် တက်စေပါတယ်။
6. ကစီဓာတ်များသော အစားအစာများ
ဂျုံ၊ သကြား၊ ကိတ်မုန့်၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် စတဲ့ ကစီဓာတ်များတဲ့ အစားအစာတွေက သွေးတွင်း သကြားဓာတ်ကို မြင့်စေပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေက ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် အင်ဆူလင်ထုတ်လုပ်မှုကို လွန်ကဲစေပါတယ်။ အင်ဆူလင်ဓာတ်များခြင်းက သက်ကြီးရွယ်အိုတွေမှာ ဆီးချိုရောဂါ ဖြစ်စေပါတယ်။
ပေါက်ပေါက်က အသက်ကြီသူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် သိပ်ကို အန္တရာယ်များပါတယ်။ ပေါက်ပေါက်မှာပါတဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ပျက်စီးစေပြီး အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကို ဖြစ်စေပါတယ်။
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ကျန်းမာပြီး လှပချင်ရင် အစားအသောက်ပုံစံကို ထိန်းညှိဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။